Nampiaka-peo ny mpandraharaha : « Tandindonin-doza ny fizahantany” -
AccueilSongandinaNampiaka-peo ny mpandraharaha : « Tandindonin-doza ny fizahantany”
Nampiaka-peo ny mpandraharaha : « Tandindonin-doza ny fizahantany”
20/06/2018 admintriatra Songandina 0
Nisesisesy tato ho ato ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ny Faritany. Anisan’izany ny ao amin’ny Faritra Menabe manokana. Voalaza fa tao anatin’ny 10 andro, dia mpandraharaha malagasy roa, mpitondra mpizahatany, no namoy ny ainy noho ny asan-dahalo sy fanafihana mitam-piadiana.
Manoloana izany tranga izany indrindra, dia nanatanteraka hetsika fanaraina ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Fizahantany ireo mpandraharaha eo amin’ny tontolon’ny fizahantany eto Madagasikara, izay ahitana mpisera-dia, mpampiasa fiara, mpamily, omaly. Nambaran’ny filohan’ny mpisera-dia malagasy tamin’izany fa manahy izy ireo ny mety hahafoana ny tontolon’ny fizahantany ao amin’ny Faritra Menabe, izany hoe amin’iny Lalam-pirenena faha-34 sy faha-35 (RN34 sy RN35) iny. Tandindonin-doza, hoy izy ireo ny tontolon’ny fizahantany eto amintsika. Voalaza ihany koa fa maro ireo famandrihana nofoanana noho ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. “Mety ho faty na tsy hisy mpizahatany hitsidika ny Faritra Menabe intsony ato ho ato. Mety ho foana tanteraka mihitsy izany ny tontolon’ny fizahantany amin’iny faritra iny, nefa dia faritra anisan’ny be mpitsidika raha i Menabe manokana. Manao antso avo amin’ny tompon’andraiki-panjakana izahay mba handray andraikitra, satria mamono ny asanay ihany koa ny tsy fisian’ny mpizahatany”, hoy izy ireo.
Tetsy andaniny, nanambara ny teo anivon’ny minisitera fa laharam-pahamehan’izy ireo ny fametrahana ny fandriam-pahalemana. Noho izay indrindra, dia voalaza fa hisy ny fiaraha-midiniky ny minisiteran’ny Fizahantany eo amin’ireo minisitera maromaro, toa ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny minisiteran’ny Filaminana Anatiny ary ny minisiteran’ny Atitany ato ho ato.
“Tsy tokony hatao ambanin-javatra mihitsy ny tontolon’ny fizahantany satria mampidi-bola ho an’ny firenena, ary miteraka asa ho an’ny mponina amin’ireny faritra be mpitsidika ireny. Noho izany, miangavy ny Fanjakana izahay mba handray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny zava-mitranga amin’izao fotoana izao”, hoy hatrany ireo mpandraharaha eo amin’ny fizahantany.
Nametra-pialana ny faha-27 Mey 2013 ny VPM Hajo Andrianainarivelo rehefa namadika an-dRajoelina, ka nilatsaka ho kandidà filoham-pirenena. Ireo izay mahalala tsara an’i Hajo dia efa fantatra hatramin’ny fotoana nanendren’ny governemantan’ny mpanongam-panjakana azy ho VPM misahana ...Tohiny